Maxkamada ICJ oo war kasoo saartay kiiska dacwada badda Soomaaliya iyo Kenya – Kismaayo24 News Agency
Maxkamada ICJ oo war kasoo saartay kiiska dacwada badda Soomaaliya iyo Kenya
by admin 31st October 2019 0143
Maxkamada Cadaalada Aduunka ee ICJ oo sanad walba soobandhigta wax qabadkeeda sanadlaha ah ayaa waxay sanadkaan warbixinada ay soo qaadatay kamid ah dacwada badda ee udhexeysa Soomaaliya iyo Kenya oo ay maxkamadu garwadeen ka tahay.
Maxkamada ayaa gabi ahaan beenisay war kasoo baxay Kenya oo ahaa inaysan ICJ qaadi karin dacwada badda ee udhexeysa Soomaaliya iyo Kenya waxayna maxkaamda sheegtay in ay dacwadaan qaadisteeda awood sharci ah uleedahay isla markasna ay iyadu go’aan kagaarayso.
Dhanka kale maxkamda ICJ ayaa warbixinteeda sanadlaha ah ku sheegtay in Soomaaliya iyo Kenya ay ku guuldareysteen in dooda badda ee udhexaysa labada dal ay si diblomasiyadeysan u dhameystaan waxayna maxkamda sheegtay inaan labada dal midna markale laga aqbaleyn muddo kororsi kale amaba codsi ku’adan in dacwada dhageysigeeda dib loodhigi.
Kiiska dacwada badda ee udhexeeya Soomaaliya iyo kenya ayaa labbo jeer oo hore dib loo dhigay qaadista iyo dhagaysiga dacwadooda,Kenya ayaa inta badan kudooda in labada dowladood dhexdooda isxalinkaraan oo aan maxkamad loo baahneyn halka Soomaaliya ay ku doodayso in kiiskaan lagu kala baxo go’aanka maxkamada.
Ciidamada Danab oo soobandhigay Miinooyin wado lagaliyay (Sawirro)
SAWIRRO:Wasiir Beyle oo Madaxda Bankiga Horumarinta Afrika kala hadlay qodob Muhiim ah.
Shirka Madaxda Maamul Goboleedyada Dalka Oo Goordhaw ka Furmaya Baydhabo.
War Cusub: Dowladdaha UK iyo Masar oo si wadajir ah uga tashanaya xaaladda dalka soomalia